musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Niue: Tourism Chief yeimwe nyika yechitsuwa inoti kwete kune plastiki
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Niue Kupwanya Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Niue Tourism mukuru mukuru Felicity Bollen anofunga plastiki uye indasitiri yemushanyi itsika yakaipa. Kutevera kutungamira kweVanuatu Niue kurambidza plastiki.
Mukuru weNiue Tourism, VaFelicity Bollen, vakati nyika yaisa parutivi mwedzi gumi nemiviri inotevera kuti vazvibvise patsika yeupenyu hwese.
Amai Bollen vakati Niue akadzidza kubva pane zvakaitika kuVanuatu iyo yakamisa kurambidzwa kwepurasitiki-kamwe chete, mashanga nemabhokisi e polystyrene musi wa1 Chikunguru.
Niue idunhu diki rechitsuwa muSouth Pacific Ocean. Inozivikanwa neayo mawere ematombo uye nzvimbo dzekorari-reef dive. Kufambisa marwenga kushambira mumvura yeNiue pakati paChikunguru naGumiguru. Ku maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kune iyo Huvalu Forest Conservation Area, uko nzira dzinopfuura nemumatombo emakorari masango anotungamira kuTogo neVaikona chasms. Kuchamhembe kwakadziva kumadokero kune dzimba dzematombo eAvaiki Cave uye zvakasikwa Talava Arches.
Mukuru wezvekushanyirwa muNiue akati: "Vanuatu yaifanira kugadzirisa purogiramu yavo yekuunza kurambidzwa nekuti nguva yekutanga yavakaisa isingasviki mwedzi mitanhatu yakanga yakanyanya."
Amai Bollen vakati gore rinopa Niue nguva yakakwana yekuisa shanduko mutsika.
“Nzira yatichazviita nayo iri nerubatsiro rwehurumende dzeNiue neNew Zealand.
“Tiri chaizvoizvo kugovera mabhegi anotsiva nokuda kwemhuri iri yose muNiue. Isu tichave tichivapa anoshandiswazve organic mabhegi emhuri yega yega. Tiri kutarisa vana pamhuri, ”akadaro.
Pamwe chete neVanuatu neNiue, Papua New Guinea neSamoa vakazivisawo zvirongwa zvekurambidza mabhegi epurasitiki anoshandiswa kamwe chete.